स्नायु रोग | स्वास्थ्य खबरपत्रिका
होमपेज » डक्टर्स आर्टिकल » "स्नायु रोग" बढ्दै छ स्ट्रोकको जोखिम डा.वसन्त पन्त, बरिष्ठ न्यूरो सर्जन, अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पताल / स्ट्रोक (बे्रन एट्याक) मष्तिस्कमा रक्त प्रवाहमा अवरोध भएपछि उत्पन्न हुने समस्या हो । मष्तिस्कका कोसिकाहरूले पु¥याउने अक्सिजनका माध्यमले नै मष्तिस्कले काम गर्छ । रक्त प्रवाहमा अवरोध हुँदा त्यो प्रक्रिया पनि रोकिन्छ, दिमागका कोसिकाहरू मर्छन् र स्ट्रोक हुन्छ । स्ट्रोक हुँदा ५० प्रतिशत मानिसको [...]
ब्रेन डेथ: नेपालमा नया आयाम डा. वसन्त पन्त, न्यूरोसर्जन, अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पताल / रक्तसंचार तथा श्वासप्रश्वास क्रिया पूर्णरुपमा बन्द भएको अवस्थामा परम्परागत रूपमा मानिसलाई मृत घोषणा गरिन्थ्यो । हाल चिकित्सा प्रविधिमा विकास हुँदै गएपछि ‘ब्रेनडेथ’ भएको व्यक्तिमा पनि कृत्रिम प्रक्रियाद्वारा रक्तसंचार तथा श्वासप्रश्वास सुचारु गर्न सक्ने अवस्था आएको छ । तर, कृत्रिम प्रक्रिया बन्द गरेमा सो व्यक्तिमा स्वतः रक्तसंचार [...]
‘माइग्रेनको टाउको दुखाई’ डा. प्रवीण श्रेष्ठ एम.डी, पि.एच.डी , कन्सलटेण्ट न्युरोसर्जन, नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल माइग्रेनलाई एकापट्टिको टाउको दुखाई हुने रोगका रुपमा पनि चिनिन्छ । टाउको दुखाई हाम्रो शरीरको धेरै मात्रामा देखिने शारिरिक समस्या मध्येको एक हो । यद्यपी यो एक सामान्य समस्या हो, कहिलेकाँही टाउको दुखाई विशेष समस्या भई चिन्ताको विषय पनि हुन सक्छन् । टाउको दुखाईका विभिन्न [...]
स्ट्रोक : चुनौतीका बीचमा जीवनको खोजी डा. प्रवीण श्रेष्ठ, न्युरोसर्जरी विभाग, नर्भिक अस्पताल स्ट्रोक पूर्णरूपमा ठिक हुन्छ÷हुँदैन भन्न अलि जटिल छ । यसकोे प्रकार, उपचार प्रविधि, उपचार सुरू गरेको समय, बिरामीको उमेर र उसको अन्य शारीरिक समस्या आदिमा भर पर्दछ । मानव शरीरका महत्वपूर्ण अंगहरूमध्ये गिदी वा मगज पनि एक हो । मगजलाई गाडीको इन्जिनसँग दाँजेर हेर्न सकिन्छ । [...]
छारे रोग डा. जगदिशप्रसाद अग्रवाल, वरिष्ठ न्युरो फिजिसियन / स्नायुसम्बन्धी एक प्रकारको बेहोस हुने रोगलाई छारे रोग भनिन्छ । तर सबै बेहोस हुने रोग छारे रोग होइन । मस्तिष्कमा भएका ‘न्युरो ट्रान्समिटर’ असन्तुलित भएमा यो रोग देखिन्छ । दिमागको विकासक्रममा वा बनावटमा केही अप्ठेरो छ भने पनि यो रोग लाग्न सक्छ । छारे रोगलाई इपिलेप्सि पनि [...]
ब्रेन हेमरेजको बढ्दो दर डा.वसन्त पन्त, बरिष्ठ न्यूरो सर्जन, अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पताल / सामान्यतया हिडिरहेको मानिस वा सामान्य अवस्थामा रहेको मानिस अचानक बेहोस भयो, एउटा पाटो नचल्ने भयो, बेस्सरी टाउको दुख्ने भयो भने उसलाई ब्रेन हेमरेज भएको हुन सक्छ । ब्रेन हेमरेजलाई अर्को शब्दमा ब्रेन एट्याक पनि भनिन्छ । यसको प्रमुख कारण ब्रेनको आर्टरी नसा फुटेर मष्तिस्कमा रक्तश्राव [...]
बढीअग्लो र अतिहोचो गराउने रोग डा. गोपालरमण शर्मा, वरिष्ठ स्नायू शल्यचिकित्सक, वीर अस्पताल / मानिस सामान्य भन्दा अग्लो वा निकै होचो हुनु संयोग मात्रै होइन । उमेरसँगै शरीरको वृद्धि विकास हुुननसक्नु एकप्रकारको रोग नै हो । कतिपय मानिसले बरदान वा कतिले अभिसाप सम्झिने यस्ता समस्याको बेलैमा पहिचान एवं उपचार भएमा पूर्ण रूपमा निको हुन समेत सकिन्छ । संसारकै दोस्रो अग्ली [...]